छबी-शिल्पाको बिषयमा राजेन्द्र खड्गीको ख’रो टिप्पणी, किशोर खतिवडालाई अन्तर्वार्ताबाटै थ’र्काए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 20, 2021 AdminLeaveaComment on छबी-शिल्पाको बिषयमा राजेन्द्र खड्गीको ख’रो टिप्पणी, किशोर खतिवडालाई अन्तर्वार्ताबाटै थ’र्काए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
काठमाडौं । राजेन्द्र खड्गी नेपालको पहिलो र एक मात्र त्यस्ता द्वन्द्व निर्देशक हुन् जसले अहिलेसम्म ५ सयभन्दा धेरै नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गरेका छन् । उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेदेखि द्वन्द्व निर्देशनमा निरन्तर एकछत्र रुपमा राज गर्ने द्वन्द्व निर्देशकमा पर्छन् । उनको द्वन्द्व निर्देशनको यात्रा ३३ वर्ष भयो ।
त्यो घर देखेपछि उनलाई लाग्यो मैले पनि यस्तै घर बनाउँछु भन्ने लागेको थियो । काठमाडौ आएपछि उनले भुकम्प गएपछि त्यस्तै डिजाइनको घर बनाएको उनको घरमा घर भित्र नै सुइमिगं पुल छ । घर भित्र नै मन्दिर समेत रहेको छ । उनै खड्गी बेला बेला समसामयिक विषयमा पनि आफ्नो विचार राख्ने गर्दछन । उनले अहिले बजार तताई रहेको छबी शिल्पा र किशोर लक्ष्मी काण्डबारे यसो भन्छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः